Kuvaka Mafomu neFormSpring | Martech Zone
Kuvaka Mafomu neFormSpring
China, August 2, 2007 China, Gunyana 19, 2013
Chinyorwa chanhasi chinobva kushamwari uye Guest Blogger, Ade Olonoh:
Kana iwe ukaita chero basa online, iwe ungangodaro wakatarisisa kwakatarisa chishandiso chekukubatsira iwe kuvaka online mafomu. Kana iwe uri blogger, pamwe imhaka yekuti iwe urikutsvaga chimwe chinhu chakasimukira kupfuura chaunogona kuwana kubva kune yakajairwa fomu fomu.
Kana iwe uri mushambadzi, pamwe wakazviona zvichinetsa kumisikidza fomu yekuunganidza makwikwi ekupinda, kana iwe wakanetseka kuyedza kuwana rumwe rudzi rwekukosha kubva kumazana kana zviuru zvemaemail mubhokisi rako rekuuya rakauya semhedzisiro yemushandirapamwe wepamhepo unobudirira. Bvuma icho: kunyangwe iwe uri HTML nyanzvi, iwe unovenga iro rinonetesa basa rekuvaka mafomu.
Ndiri kuda kukuzivisa iwe ku FormSpring, chishandiso chakakura chinotendera vashandisi vechero hunyanzvi hunyoro kuvaka mafomu epamhepo, uye zvinokubatsira zvirinani kugadzirisa kutumira kwaunotora kubva kune vatengi. Yakatanga kuvhurwa kutanga kwa2006, asi yakaburitswa vhezheni 2.0 vhiki ino inosanganisira yakawanda yezvinhu zvinotonhorera zvinoita kuti ikoshe kutarisisa.
Runako rweFormSpring nderekuti iwe unogona kuseta fomu repamhepo rekubatika, ongororo, kana fomu rekunyoresa mumaminetsi mashoma usingashandisi chero HTML kana kodhi yekunyora. Unogona kurerukirwa kuziva kuti iwe unogona kuzviita wega wega usingatombofonere munhu kubva kuIT.
Heino skrini yeiyo fomu anovaka skrini - iwe unovaka fomu rako nekukweva uye kudonhedza minda, uye unogona kuona kuti fomu rako rinotaridzika sei munguva chaiyo:
Paunenge wagadzirira kushandisa fomu rako, unogona kuteedzera nekunamatira chinongedzo chekutumira kune vashandisi vako, kana kubata imwe tambo yeHTML kodhi iwe yaunogona kupinza mublog rako kana webhusaiti. Chikamu chikuru nezve izvi ndechekuti iwe unokwanisa kunyatsobatanidza fomu yako mukati meyako dhizaini, kuchengetedza yako brand.
Unogona kutarisa kutumira roll mukati neemail notices kana RSS feed. Uye kana iwe wagadzirira kugadzirisa mhedzisiro iwe unogona kurodha pasi pepanhau reExcel rine zvakatumirwa, kana kuendesa iyo data mudhatabhesi kana CRM system.
Chinhu chakanakisa ndechekuti iwe unogona kugadzira iyo yemahara account iyo inopa yakawanda yeanoshanda. Kana iwe uchitsvaga kumwe kushandiswa kwakanyanya, zvirongwa zvakabhadharwa zvinotanga pamadhora mashanu / mwedzi pasina zvibvumirano kana mari yekumisikidza.
Edza iyo yakazara demo, verenga zvakawanda nezve ese zvinhu, kana kusaina iyo yemahara account.
Zvinhu zvisere zvausingazive nezvangu
Aug 2, 2007 na9: 52 PM
Ndine mamwe matambudziko munguva yakapfuura nemafomu uye kuwana ruzivo rwese kumazana nemazana emaimeri. ruzha urwu senge chishandiso chikuru chebhizinesi rangu. 5 madhora pamwedzi hapana!
Aug 3, 2007 na5: 47 PM
Pandakaverenga musoro wenyaya, ndakafunga kuti yaive pfungwa yekuti saiti yaizobatsira mumwe munhu kugadzira fomu rekushandisa pane yavo saiti. Izvo zvakandipa manyawi, sezvo paive nevanhu vakati wandei vandaizotumira iyi link, yekushandisa kwavo vega.
Zvekushandisa bhizinesi, dai ndaizoshandisa sevhisi kugadzira fomu, ini ndaizoda kuti igadzire fomu, kukodha, uye ndipe mirairo yekuita kuti ishande pane yangu saiti, ndichishandisa server yangu.
Mune bhizinesi, kana chero ruzivo rwakagara pamaseva asiri ako, kunyanya mafomu - uye mafomu ekutaurirana?!?! haiwa! - kwete mukana ndaizorega igare pane imwe server server. Kana iyo kambani ikaenda nemimba-husiku husiku (funga nezveiyo ichangoburwa kambani yeVoIP iyo yakavhara sevhisi kune vese vatengi vayo pasina yambiro), iwe unorasikirwa nezvose.
Aiwa ndatenda. Makumi mashanu emari pamwedzi haana kuwanda, asi ini ndine akati wandei ekutora mapakeji uye epakati mutengo wemapakeji i $ 19 pamwedzi. Kune iyo $ 19, ini ndinowana matanhatu mazita emazita akasununguka, pamusoro pe 300gig yenzvimbo, mafomu, uye ese marudzi ese ezvimwe maturusi (mazhinji ini handibate), uye risingagumi email aliases uye 2,000 email kero. Wedzera imwe chiuru pasina kana chinhu.
Kunyora fomu hakuna kuoma. Mabhizimusi, kunyanya, anofanirwa kunge aine hunyengeri nezve kubvumidza chero munhu asiri ivo vanhu vavo kutonga kwemashoko avo. Kana iyo FomuSpring sevha ikabiwa, iyo kambani inorasikirwa nemeso nevatengi. Kupfuudza iyo bhu uye uchiti, "Watinopa fomu rekutaurirana akazviita ..." chikonzero chakashata.
Ndatenda, asi ini ndinonyora mafomu angu ndovaita kuti vabve paserura yangu.